पीसीआर – Page2– Himalaya Television
सुदूरपश्चिमका नाकामा कडाई, पीसीआर रिपोर्टबिना प्रवेश निषेध ! (भिडियो रिपोर्टसहित)
१४ वैशाख २०७८ कैलाली । कैलालीसँग सीमा जोडिएको गौरीफन्टा नाकाबाट पीसीआर परीक्षणबिना भारतीय नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । कोरोनाको बढी जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा सीमा नाकासँगै अन्य क्षेत्रमा पनि कडाइ गर्न थालिएको छ । गड्डाचौकी,...
बाँकेमा पीसीआर परीक्षण गराउनेको भीड (भिडियो रिपोर्टसहित)
८ वैशाख २०७८ नेपालगञ्ज । कोरोनाको सक्रमण तिब्र गतिमा फैलन थालेपछि नेपालगञ्जका अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण गराउनेको भीड लाग्न थालेको छ । दैनिक ५ देखि ६ सय जनाले कोरोना परीक्षण गराउने गरेका छन । भेरी र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका दुईवटा...
बागलुङमा अझै पीसीआर मेसिन किन पुग्न सकेन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२६ चैत २०७७ बागलुङ । पोहोर कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले ठाउँ ठाउँमा पीसीआर प्रयोगशाला बनायो । ९ महिनाअघि बागलुङमा पनि प्रयोगशाला बनाएर कोरोना परीक्षण गर्ने घोषणा भयो । तर अहिलेसम्म पनि बाग्लुङमा पीसीआर मेसिन जडान हुन सकेको छैन्...
भारत भ्रमणमा जाने यात्रुका लागि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
१२ फागुन २०७७ काठमाडौं । भारत भ्रमणमा जाने सबै यात्रुले अब पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिजल्ट आएको रिपोर्ट अनलाइनमा अपलोड गरेर यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ । अब अनलाइन अपलोड नगरी यसरी यात्रा गरेमा भने यात्रा अनुमति नपाउने भारतीय हेल्थ...
गुल्मीमा पीसीआर प्रयोगशालाका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएनन् (भिडियो रिपोर्टसहित)
९ माघ २०७७ गुल्मी । गुल्मीको तम्घासमा रहेको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीले ३ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । कर्मचारीले अहिलेसम्म नियुक्ति र तलव सुविधा केही पनि नपाएका हुन् । उनीहरुले यसका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि सुनुवाइ...
नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर दुबई उड्न खोज्ने सात जना पक्राउ
१९ पुस २०७७ काठमाडौं । कोरोनाको नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएर दुबई जान खोज्ने ७ जना पक्राउ परेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईको उडानबाट दुबई जान लागेका उनीहरु नक्कली रिपोर्टसहित हिजो राती पक्राउ परेका हुन् । जाँच्ने क्रममा...
पीसीआर परीक्षणमा कालोबजारीको अरोपमा सरकारीसहित दुई अस्पताल कारवाहीमा
१ पुस २०७७ चितवन । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी पिसीआर शुल्क असुलेको भन्दै भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गरेको छ । नेपाल सरकारले पिसीआर गरेको रु दुई हजार शुल्क तोके पनि त्यसलाई...
८१४४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप १६७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप ७ जनाको मृत्यु
६ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार ३ सय नाघेको छ । पछिल्लो पटक थप ७ जनाको मृत्यु भएपछि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको एक हजार ३ सय ५ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले...
पीसीआर रिपोर्टका कारण नेपाल एयरलाइन्सको उडान रोकिएपछि छानबिन समिति गठन
४ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । केही यात्रुको पीसीआर रिपोर्टमा देखिएको समस्याका कारण नेपाल एयरलाइन्सको उडान रोकिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद व्यवस्थापन इकाइले डाक्टर मुकुन्द शर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन...